Fanavaozana firmware vaovao ho an'ny Apple AirPorts | Vaovao IPhone
Tsy andro firy (iray volana teo ho eo izay) no re fa nifarana ny ekipa injeniera sy ny endrika famolavolana ny faritra AirPort sy Time Capsule, ho lasa ampahany amin'ny fizarana hafa ao amin'ny orinasa. Ity lohahevitra ity izay napetraka teo ambony latabatra tamin'ny iray amin'ireo andinin-tsoratra mikasika ny fivoahana sy ny honohono momba ny vokatra sy serivisin'i Apple, Mark Gurman, ary androany dia io no resaky ny mpampiasa sasany mahita akaiky ity farany. Etsy ankilany tsy tokony hohadinointsika fa ny AirPorts dia nohavaozina tamin'ny taon-dasa 2013 ary nanomboka tamin'izay dia mbola tsy nahita fiovana na router vaovao mivoaka avy amin'ny orinasa paoma manaikitra isika.
Amin'ity tranga ity dia miatrika vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa izay efa manana ny iray amin'ireto router Apple ireto hatramin'ny nahazoany fanavaozana firmware izay mamela azy ireo hiditra kinova 7.7.8 ho an'ireo fitaovana izay manana protokol 802.11ac, ary hatramin'ny 7.6.8 ho an'ireo izay manana 802.11n. Na ahoana na ahoana, ilaina ny fampiharana: AirPort Utility hahafahana mametraka ny firmware vaovao ao anaty router, noho izany dia tsara kokoa ny misintona izany avy amin'ny App Store na Mac App Store. Ireo kinova vaovao amboary ny hadisoana kely sy bibikely.
Raha manana iray amin'izy ireo ianao aza misalasala manavao faran'izay haingana araka izay azo atao mba hahazoanao tombony amin'ny fanatsarana sy ny fanitsiana ny bibikely ato amin'ity kinova firmware vaovao ity. Ho an'ireo rehetra izay nieritreritra ny hividy ny iray amin'ireto AirPorts ireto dia tsara kokoa ny tsy miandry fotoana ela satria mety hiafara amin'ny fisintonana azy ireo avy any an-tsena i Apple, zavatra iray izay toa tsy dia tsara loatra raha jerena ireo tombony sy mora ampiasaina ho an'ny mpampiasa Apple an'ny AirPort Express, Extreme ary Time Capsule raha ampitahaina amin'ny katalaogin'ny mpandeha ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Fanavaozana firmware vaovao ho an'ny Apple AirPorts
Momba ny hoe ajanon'i Apple ny seranam-piaramanidina express na mahery. Raha ny hevitro manokana dia heveriko fa tsy izany, raha ny hevitro dia hamoaka vokatra hifaninana amin'ny akony avy any Amazon na tranokala Google izy ireo izay manambatra an'i Siri sy ny Router, angamba misy mpandahateny ny AirPort Extreme ary ny mitovy dia mitovy amin'ny akony teboka Amazon.
Ho fahombiazana ho an'ny paoma izany.